Manchester United oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 16 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dheesha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Manchester United waxa ay shaacisay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay mininkeeda joogto xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20, waxaana ay dib ugu ugu laabatay maaliyaddii ay ku ciyaaraysay xilli ciyaareedkii 1998/99.
Kooxda Manchester United maaliyaddan ay shaacisay oo ay xiran doonto xilli ciyaareedka soo socda ayaa la muuq ah funaanadii ay saddexleeyda koobabka ah ku qaaday kooxdu kal ciyaareedkii 1998/99.
Xilli ciyaareedkaas kooxda haatan uu hoggaamiyo macallin Ole ayaa ku wada guuleysatay saddex koob ee waa weyn oo kala ah Premier League, FA Cup iyo Champions League.
Labiskan cusub oo ay kooxda Manchester United ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiga ee Adidas.
Soo bandhigtista maaliyaddan cusub waxaa ka qeyb qaatay Paul Pogba iyo Goolhaye David De Gea kuwaasoo mustaqbalkooda kooxda Man United shaki weyn la galinayey.
Falanqeeye ka tirsan Shabakadda ESPN oo Griezmann u sheegay kooxda ugu fiican oo uu ku biiri karo